LA DAGAALLANKA BARADHADA BARADHO-BARADHO AH EE BARADHADA DADKA - BARADHADA
Sida loo wajaho Colorado baradho baradho hababka dad
Baradiidka baradhada Colorado waa qashin badan oo ku yaalla aqallada xagaaga ee badan. Mararka qaar waa wax aad u adag in la badbaadiyo bataatiyada cayayaankan. Cayayaanka ayaa ku habboon cayayaanka, si dhaqso ah u dhistay iyo maalmo yar, burburin cagaarka barafka, taas oo yareyneysa dhalidda. Sidaa darteed, in this article waxaan ka hadli doonaa ku saabsan baradho baradho Colorado iyo dagaalka ka dhanka ah by daaweyn dad.
Astaamaha iyo sharaxaadda Baradiidka Baradhada ee Colorado
Si aad u bilowdo, tixgelin waxa uu baradho-baradku ku yaryahay Colorado, marka la ogaado iyo sida ay u faafto aduunka oo dhan.
Cayayaanka waxaa lagu ogaaday asal ahaan Maraykan ah Thomas Sai 1824. Xayawaanku wuxuu magaciisa ku helay sababo la xiriira xaqiiqda ah in uu burburay beeraha barafka ee gobolka Colorado, si kastaba ha ahaatee, Mexico waa goobta lagu magacaabo beerta, halkaasoo hoosaadka kale ee qoyan ee baradhada barafka ku nool ee ku nool caanaha sigaarka iyo dalagga bidix.
Dalka yurub, duqsigu wuxuu ku fidaa inta lagu jiro dagaalkii koowaad ee aduunka. Dalka ugu horreeya wuxuu ahaa Faransiis. Baradho baradho ah oo Colorado ah ayaa u dhaqaaqay bariga, horeyna 1940-kii waxay ku dhufatay dhulka USSR. Xoriyaadka ugu horeeya waxaa laga helay gobolka Lviv sanadkii 1949.
Xaraashka baradhada Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata) waa cayayaanka oo ka mid ah qooyska caleenta caleen. Cayayaanka ayaa ka qulqulaya oo keliya barandhada, laakiin sidoo kale dhammaan dalagyada bidix: basbaas macaan, eggplants, yaanyada, physalis iyo henbane.
Hadda oo ku saabsan bacriminta ee kuwa lamid ah. Dumarka of Colorado baradho baradho ah ee nolosheeda ku saabsan qiyaastii 500-700 ukunta, kuwaas oo lagu abaabulay kooxo ah 30-40 pieces on dhinaca dambe ee caleen. Laba toddobaad ka dib, dirxiga dirxiga ee ukunta. Socodkan wuxuu qaadanayaa ilaa 25 maalmood.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah dhedhooyinka waxay u jiifaan ilaa 2500 ukumood, mid kasta oo ka mid ah taas oo u noqon doona dhogorta.
Si ay u sahlanaato in la qiimeeyo heerka marxaladda uu yahay maskaxda, waxay aqoonyahanka nafaqada ah u aqoonsadeen afar sano. In koowaad iyo labaad instar dirxiga waa mid aad u yar, sedentary. Waxay ku hayaan kooxo waxayna ku quudiyaan substrate ay ukumo ku taalay.
Marxaladdan, bukaan-socodka ma keenaan waxyeelo weyn oo soo gaarta dalagyada, waana ay u fududahay inay iyaga gacanta u soo ururiyaan.
Ka dib markii la gooyey, marxaladaha saddexaad iyo afaraad ee koritaanka, dirxiga kala firdhiya, inta badan u guurto dhaqamada kale. Dirxiga qudhooda waxay noqdaan kuwo waaweyn, qiyaasta waxay la mid tahay duqsadda qaangaarka, laakiin midabka dirxiga ayaa weli ah casaan ama casaan khafiif ah.
Marka dirxiga soo noqdaan 20-25 maalmood, waxay u tageen dhulka loogu talagalay. Qoto-dheer ee uu dirxigu ku xoqo ciidda, badanaa kama badna 10 cm.
Hadda ogow inta cabsida ay cuni karto cunnada cagaaran ee baradhada.
Dad badan, waxay noqon doontaa wax la yaab leh in duqsiyo ay cunaan maalin iyo habeenba. Habeenkii, dulsaarku wuxuu ku dhuftey caleemo badan oo dhiiqo ah. Laga bilaabo 1 bil kasta duumul kasta wuxuu ku baabi'i doonaa 4-5 g oo ah caleenta ama caleemaha, dhogorta - 1-2 g.
Waxay u muuqan kartaa in waxyeello ka timaadda musqulaha aysan aheyn mid aan qiimo lahayn, laakiin waa inuusan ilaabin in hababka kiimikada ee ugu badan laga yareeyo ama la joojiyo burburku ka dhaco caleemaha.
Celcelis ahaan, 10 dirx oo ah baradho baradho ah oo Colorado ah ayaa yarayn kara dhalidda by 12-15%, iyo 40-50 dirxiga gebi ahaanba wada baabbi'in doonaa baadiyaha, hoos u dhali dhalidda by 100%. Goosashada ka dib, kuwa lamid ah u tagaan dhulka at 60-70 cm iyo jiilaalka ilaa guga.
Waa muhiim! Beetles ayaa ka soo baxa dhulka kaliya marka heerkulku kor u kaco 15 °C. Guga, kuwa lamid ah waxay ku quudiyaan caleemaha cawska, kadibna geedo yaanyo iyo basbaas.
Qarsoonaanta joogtada ah iyo "burburinta" waxay been sheegeysaa xaqiiqda ah in aanay dhulka ka dhoofin muddo dhawr sano ah. Isla mar ahaantaana, waxaa jira mar walba meel kayd ah oo dhulka hoostiisa ah haddii shillalka qofka la sii daayay uu dhinto. Intaa waxaa dheer, kuwa lamid ah ma kudhicaan biyo, si sahlan ayaa loo qaadaa dabaysha, iyo joogitaanka baalashu waxay siinaysaa fursad ay ka duulaan meel ilaa meel, halka kobcinta xawaaraha ilaa 5-7 km / h.
Qiimaha dalagyada beeraha iyo beeraha si loola dagaallamo baradho baradho ah
Xakamaynta waxtarka leh ee baradhada barafka Colorado lama qaban karo iyada oo aan aqoon u lahayn wareegta dalagga iyo habka korriinshaha ee baradho sii kordhaya iyo dalagyada kale ee bidha.
Bannaanka u badan oo la yaab leh sababta, xitaa ka dib markii lagu daaweeyo sunta cayayaanka, baradho ah baradho Colorado sii wadaan si massively burburiyaan baradho, iyo tirada dulin ah ee weelka deriska ah waa boqolaal jeer ka yar.
Sida kor ku xusan, bahalka jilicsan ee dhulka, oo u dhaw dulka baradho ba'an, taas oo macnaheedu yahay sanadka soo socda wuxuu gaari doonaa dusha sare ee raadinta cuntada. Oo hadday baradhadu koraan isla meeshaas, ma fududa inaad fududayso hawsha miisaanka, laakiin sidoo kale soo jiidanaysa kuwa lamid ah meelo kale ilaa aaggan.
Macnaha dalagyada dalagga waa in la beero dalag ka dib baradho, taas oo aan saameyn ku duudduuban. Goobta solanaceae, waxaad ku beeran kartaa basasha, toon, karootada ama badarka. Wali ma jiidi kartid jiilaalkaaga jiilaalka dhulka, iyo sida maneuverest uu isaga ka xishoodo xiisahaaga boggaaga.
Waxyaabaha soo socda ayaa ah arrimo kale oo agrotechnik ah, oo aan lahayn isticmaalka kiimikada, waxay gacan ka geysan doontaa in la yareeyo dhibaatada ay sameeyeen qashinka.
Sawirradaadu waa inay ku yaalliin inta ugu badan ee suurtogalka ah laga bilaabo abuurka bocorka ama dalagga bidixda.
Qaylada xilliga jiilaalka waxay noqon kartaa "walwalsan" qoto dheer oo qoto-dheer, taas oo loo baahan yahay in la qabto ka dib baradhada goosashada.
Marka lagu shubo geedo of baradho, caleemaha hoose waa in la rusheeyey si ugu badan ee dhulka.
Daraaseynta joogtada ah ee u dhexeeya safafyada ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso ardayga qashinka ah.
Gogol xajin leh caws ama cirbado.
Waa muhiim! Kala beddelashada beeraha iyo tiknoolajiyadda beeraha si buuxda uma ilaalin karto dhulkiilaha, laakiin waxay yareyneysaa tirada dadka.
Dhirta Estrogens ka soo horjeeda duqsiyo baradhada Colorado
Dhirta cirridka ayaa ah hab kale oo lagu ilaaliyo baradho ka soo baxa baradho-baradhada Colorado.
Dhirta oo cabsiinaysa baradho baradho ah Colorado waxaa ka mid ah:
Xaqiiqda ah in dhaqamadaasi ay leeyihiin ur ah kaas oo cabsi galinaya qashinka. Dhab ahaantii, dhirtu ma qaadaan hanjabaad toos ah ee cayayaanka, laakiin duqsiyo baradho Colorado ma deyn doono beeritaanka haddii ay uriso xun.
Waa in la fahamsan yahay in ilaalinta la isku halleyn karo ka mid ah duqsiyada Colorado baradho noqon doonaa oo kaliya waqtiga ubax iyo tiro badan oo dhirta aagga. Xitaa xaaladdan, waxaa jira shakhsiyado aan waxyeello lahayn.
Ma taqaanaa? Cunista baradho, baradho baradho ah Colorado waxay uruurisaa walxaha sunta ee jirka. Taasina waa sababta uusan u dhaqmin cadaawayaashiisa.
Dareemayaasha jiritaanka baradhada barafka ee Colorado: oo ka cabsada cayayaanka
Haatan aan ka hadlo kuwa ku cunaya kuwa lamid ah Colorado - dabeecadaha dabiiciga ah.
Dabeecadda ayaa hubisay in dadkani ayan ka baxsanin "loo oggol yahay".
Taasi waa sababta ay cayayaanka badani u dili karaan ilaa 80% dadweynaha ee baradhada barafka ee Colorado.
Tusaale ahaan, Maraykanka, cadowga ugu weyn ee baradho-baradiidka Colorado waa cayayaanka ka hortagga. Hal cijo oo cayayaanka ah ayaa awoodi kara in ay cunaan ilaa 300 oo ukumood, qof weyn oo ku noolaa wax ka badan 2000. Nasiib darro, dhammaan cadawga dabiiciga ah ee dadka deggan Colorado ee Ameerika kuma habboona xaaladaha Yurub ama wadamada CIS.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale haynaa tiro badan oo cadawga ah dulmiga, taas oo sanad waliba yareeyso tirada. Kuwaas waxaa ka mid ah ladybug, qashin qubka, indhaha dahabiga ah, cayayaanka kala duwan, qoob-ka-ciyaarka, ceelasha iyo caarada. On territory ee USSR hore, ilaa 50 nooc oo canjeero ku nool yihiin, kuwaas oo cuno ukunta, dirxiga iyo kuwa qaangaarka dadka waaweyn.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in isticmaalka sunta cayayaanka ay burburinayso oo kaliya qayb ka mid ah dadweynaha ee baradho duqsiyo Colorado ah, laakiin sidoo kale dhammaan waxyaaba dabiiciga ah dabiiciga ah, tan iyo badankoodu waa cayayaanka. Sidaa darteed, haddaad ku xisaabtamayso caawinta dabeecadda, iska ilaabi isticmaalka kiimikada.
Waxaa jira qalab lagula dagaallamo jiritaanka baradiidka Colorado, taas oo aan loo aaneyn karin kiimikada, agrotechnical ama dabiiciga ah. Waxaan kuu sheegi doonnaa sida iyo goorta la ururinayo barafka barafka ee gacanta gacanta, waxaan kaa caawin doonaa in aad ku qabatid dul-qaadidda adoo adeegsanaya baayac oo sharax in isticmaalka cawska u dhexeeya safafka baradhada u dhexeeya saf.
Dhammaan siyaabahan ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso tiro badan oo ah duqsiyo waaweyn iyo dirxiga, laakiin ma wada baabbi'in doonaan dhammaan shakhsiyaadka dulinka.
Gacmaha oo la soo qaadayo walxaha Colorado
Uruurinta baradho baradho ah Colorado maaha sida waxtar lahayn maadaama ay u muuqan kartaa. Marka ugu horeysa ee cudurka, marka ay ukumo ku muuqato caleemaha, in ka badan hal kun oo qof oo mustaqbalka ah ayaa la burburin karaa hal wareeg.
Habka dagaalku wuxuu macno samaynayaa, maxaa yeelay waa wax aan faa'iido lahayn in lagu sumo ukumaha, iyo dirxiga qashinka leh waxaa laga helaa waqti "qaniinyo" caleemaha duurka ka hor inta aan lagu daaweyn kiimikooyinka ama hab kale.
Kormeer barandhada isla markiiba ka dib markii biqilka. Ka taxadar dhinaca dhinaca dambe ee xaashida, kaas oo ukunta la dhigo. Waxaa ugu wanaagsan in la hubiyo dhammaan garaafka dhowr jeer si loo xaqiijiyo in aysan jirin cayayaan.
Ka baxaa ukumaha ayaa la saaraa oo la burburiyaa. Beetles iyo dirxigooda waxaa lagu soo ururin karaa dhalooyinka waxaana lagu gubay ama lagu dhejin karaa kerosene / saline. Si kastaba ha noqotee, si fudud u tuurista dhiqlaha iyo dirxiga, sababtoo ah waxay ku noqon doonaan goobtaada.
Dabaysha iyo nabarada
Haddii aad doonaysid inaad beerato dhul ballaaran oo baradho ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad si toos ah uga ilaaliso kaashka. Sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa dabin guriiyada oo la dhigayo wareegga wareegga goobta.
Waa muhiim! Dabinka ayaa shaqeyn doona oo keliya haddii aysan jirin jiilaal jiilaal ah oo ku yaal dhulka dhulkiisa.
Boodh ayaa lagu qotomaa wareegga xuddunta iyadoo la adeegsanayo suunka V-qaabeysan. Darbiyada qoyaanka waa in ay ahaadaan kuwo dusha sare ah (xumbada aan ka yarayn 45 °). Qodobka qashinka ah waa 30 cm, dhererkuna waa 20-50 cm. Qeybta hoose ee godadku waxay kuxirantahay filim madow oo ah 130-160 cm ballaaran, filimka waxaa si adag loogu cadaadiyaa derbiyada, godadka waxaa la sameeyaa 2-2.5 m 2dii biyo ah. Dhulku wuxuu ka soo baxaa qoryaha oo la dhigo dusha sare (sida baqshiish) oo heerkulku yahay.
Fikradda waa in baradhada barafka ee Colorado (guga ma duuli karin sababta oo ah la'aanta awood) u guuro oo keliya dhulka. Helitaanka godka, wuxuu ka soo bixi karaa oo keliya godadka. Iyada oo ay sabab u tahay qadarka qoyaanka ee meelaha qummaatiga, fungus ayaa soo baxa, taas oo waxyeello u leh cayayaanka.
Sidaa darteed, duqsigu wuxuu leeyahay 2 doorasho: midkoodna u dhintaan fuuqbax toddobaad gudaheed, ama u dhinto fungus.
Tani waa habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo dalagyada solanaceous laga bilaabo Colorado baradho baradho la'aan ah isticmaalka kiimikada. Dabinka noocan ah wuxuu joojin doonaa qiyaastii 70-75% dhammaan cayayaanka.
Haddii sawir leh barad yar, ka dibna waad isticmaali kartaa "Dhib" baakad laga bilaabo baradhada.
Si arrintan loo sameeyo, usbuuc ka hor caleemaha goobta ayaa u baahan inay kala firdhaan digriiga baradho ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan la isticmaalin khudaarta caleemaha waa in la qoyay maalin maalin xal ah ee chlorophos.
Xayawaanka daajisku waxay daadiyaan barandhada iyo mararka qaar ka dhinta sunta. Iyada oo caawimaad ka ah guntashadan, waxaad baabi'in kartaa laynka koowaad ee lamid ah, kaas oo u muuqda ka hor caleemaha baradho ah.
Hawlgab noocan oo kale ah ayaa la samayn karaa goosashada ka dib, markii cayayaanku wali wakhti u helin dhulka. Sidaas ayaad ku kalsoonaan doontaa qorshaha sanadka soo socda.
Cawska qallalan ee u dhexeeya safafka baradhada
Mulching cows - ma aha habka ugu wax ku oolka ah ee loola tacaalo baradiidka Colorado baradho, laakiin sidoo kale waxay qaadataa meel, maxaa yeelay waxay qabataa dhowr hawlood mar: waxay ku niyadjabaysaa curinta, marka laysku keeno nafaqooyin dheeraad ah oo ku saabsan dhaqanka, waa "guriga" cadowga dabiiciga ah ee baradhada baradho ee Colorado iyo dims ee ciidda, xajinta qoyaanka.
Xaaladda ayaa ah, marka jebinta cawska, waxay soo bixisaa ur ah urta urta baradho, waana ay ku adagtahay in loola baxo si loo helo dalag. Sidaa darteed, duqsiyo, ku dhacaya on site, qaadan doonaa baradho ah ee dhaqanka aan la dabooli karin isaga.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1876, baradho baradho ah oo Colorado ah ayaa bilaabay safarkeeda iyada oo shixnaddan lagu qabtey bambaanooyin oo si guul ah uga gudbay Badweynta Atlantic. Marka ugu horeysa ee cayayaan ee Europe waxaa lagu diiwaan geliyaa dekedda Leipzig (Jarmalka).
Maareynta infusions iyo decoctions
Kordhinta mawduuca sida loola tacaalo baradiidka Colorado, waa wax aan macquul aheyn in la xusuusto waxtarka daaweynta dadweynaha ee loo adeegsaday ka hor inta aan la isticmaalin kiimikada adag. Waxaa jira tiro ku filan oo feker ah iyo decoctions kuwaas oo kaa caawin doona haddii aan la tirtirin dulin, ka dibna ugu yaraan si loo yareeyo nambarkiisa ama ka saarto goobta.
Tubaakada ka soo horjeeda baradhada barafka Colorado ayaa loo isticmaalay muddo dheer. Xaqiiqdu waxay tahay in nikotiintu suntu u tahay uun dadka ama xayawaanka. Cayayaanka ayaa sidoo kale u nugul nicotine, iyo soo galitaanka jidhka cayayaanka ayaa keeni doona dhimasho.
Waxaa haboon in la xusuusto taas faleebada tubaakada wuxuu burburin karaa ma aha kaliya baradho baradho oo Colorado, laakiin sidoo kale liiska dhan ee waxyeello lahayn ama xitaa cayayaanka faa'iido leh.
Sidaa daraadeed, ka hor inta aanad adeegsanin faleebo, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto haddii aad burburinayso fauna waxtar leh oo aad ku sumooto xayawaanka saara kara "iskuday" faleebadan. Wixii soo saarista faleebo Waxaad u baahan doontaa inaad qaadato 500 garaam oo tubaako, boodhka tubaakada, caleemaha, ama dhirta afuufta. Dhammaan kuwan waa dhul oo la qalajiyey.
Waa muhiim! Laguma talin in la isticmaalo sigaarka "sigaarka" laga soo qaato xirmooyinka sigaarka sababtoo ah xaqiiqda ah in aysan jirin wax ka badan 1/3 tubaakada dhabta ah, mana aha macno macquul ah in la baro bataatiyada kiimiko kasta.
Marka xigta, tubaakada qasacadaysan waxay u baahan tahay inay ku adkeyso laba maalmood oo weel weyn, iyada oo ku dareysa 10 litir oo biyo ah. Laba maalmood ka dib, xalka waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah oo ku dar 50 g oo saabuun. Waxaan sugeynaa saabbuunku in la burburiyo, waxanu dooneynaa in aan xakameyno beerashada bowling.
Faleebo ee caleemaha poplar
Faleebo on caleemaha poplar halkii ay ka ilaalinayso duqadda marka loo dilo. Sidaa darteed, sida ugu dhakhsaha badan saamaynta kaararka processing, baradho-baradho Colorado ayaa soo noqon kara.
Si aad u bilowdo, soo qaado baaldi nus ah (10 litir) caleemaha. Caleemuhu waa inay noqdaan kuwo cagaar ah oo cusub, sida faleebo wanaagsan waa in ay leeyihiin ur adag. Baaldi leh caleemo sare ilaa ay ka buuxsamaan biyaha oo gaaska ku ridaan. Kadib karkarinta caleemaha waxaa la kariyaa saacad badhkeed kadibna ka tagay si ay u dillaacaan maalin.
Next, faleebo u baahan tahay inaad ku buufin beerida oo dhan ee baradho iyo dalagyo kale oo solanaceous. Urka caleemaha ayaa xannibaya urka dhirta ee loo baahan yahay in cantoobada loo baahdo, Colorado si sahlan ayaa "u dhaafi" goobta.
Haddii aad ku koraan walnut (meeshoodii ama duurjoog) gurigaaga dhexdiisa, waxaad ka samaysan kartaa sunta ka soo baxa barafka barafka leh ee gacmahaaga. Wixii faleebo waxaa loo isticmaali karaa sida caleemaha lowska, iyo miraha iyo qolofka.
Kala duwanaanta caleemaha waxay ku lugleeyihiin xilliga dayrta, qalajinta iyo ilaalinta ilaa guga. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu horreeya ee baradho soo muuqdaan, waxaan bilaabaynaa inaan diyaarinno faleebo. Wixii faleebo waxay u baahan doontaa 2 kg caleemo, kuwaas oo lagu qooyay 10 litir oo biyo ah. Diyaarinta duufaanta waxaa lagu tilmaamaa ur adag oo caleemo cows ah. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato ugu yaraan 4-5 maalmood. Ka hor inta aan la isticmaalin faleebo waxay u baahan tahay inay 2 jeer ku xereeyaan.
Waxaa loo isticmaali karaa miro cusub ama caleemooo ka muuqata guga goor dambe - xagaaga hore. Si arrintan loo sameeyo, 2 kg oo ah miraha cagaaran (lowska aan cagaha lahayn) iyo caleemaha cagaaran waxaa lagu qasan yahay 300 g oo ah caleemo qallalan iyo qolof ah, ku shub 10 litir oo biyo ah karkaraya oo u dhigma ugu yaraan 5 maalmood. Faleebo ka hor intaan la isticmaalin faddareyn iyada oo cheesecloth ah.
Galmada cad acacia
Wixii diyaarinta faleebo dhirta cagaaran ee loo isticmaalo. Si aad u faleebo, waxaad u baahan tahay in la gooyo 1 kg ee jilif (qolof ah waa in ay ahaato mid bilaash ah laga bilaabo dildilaaca, oo aan lahayn qudhuun iyo dhaawac xoog leh), qalaji iyo qaawi. Marka xigta, ku qoyso jilif 10 litir oo biyo ah kuna adkeyso ilaa 2-3 maalmood.
Sumoobka soo baxa waxaa lagu sifeeyay iyada oo loo jaro oo loo isticmaalo daweynta dusha sare ee duurka baradho.
Waa muhiim! Faleebo waxay u baahan tahay inay ku buufiso qaybta above-ka. Si fudud ku shubaya baadiyaha kasta leh faleebo ma aha oo kaliya waxtar lahayn, laakiin sidoo kale burburin warshadda.
Faleebo qaadka baska
Onion Husk loo isticmaalo in lagu soo celiyo cayayaanka badan, oo ay ku jiraan baradho baradho ah. Si aad u diyaarisid faleebo, waxaad u baahan tahay inaad qaadato nus baaldi ah oo qallalan, nadiifinta basasha, nadiifi biyo karkaraya (marka ugu horeysa culeyska ku rid bacda si aysan u daboolin) oo ku adkeyso 1-2 maalmood.
Xilligaas ka dib, kabriinka waa laga saaraa, iyo soo saarida waxaa lagu sifeeyaa faashad ama dhejis. Waa suurtagal in la buufiyo baradhada ama habeenkii kale ee faleebo soo noqnoqonaya, sidaas awgeed waxaan ku dhufanaa 1 illaa 2 biyo ah oo biyo ah waxaana loo isticmaali karaa in lagu cabo xayawaan.
Ma taqaanaa? Doogga basasha ayaa lagu dabooli karaa dhulka dushiisa leh baradho xilliga deyrta si looga hortago muuqaalka lamaanaha guga. Si arrintan loo sameeyo, miisaanku waa kala firirsan yahay goobta oo qoday si qoto dheer oo ah 30 cm.
Faleebo geedka canabka ah
Faleebo of dixirigeed - daaweyn caan ah dadweynaha for the Colorado kuwa lamid ah. Xijaabka, sida diirka basasha, waxaa loo isticmaalaa in lagu cabsiiyo cayayaanka badan ee cayayaanka. Sidaa daraadeed, adoo isticmaalaya faleebo geedka xawaashka ah, maaha kaliya inaad ka saarto Colorado, laakiin sidoo kale waa ka takhalusi kartaa daraasad kale oo dulin ah.
Wixii diyaarinta faleebo Waxaad u baahan doontaa qoryaha iyo qoryaha qoryaha.
10 litir oo biyo kulul waxay qaadanayaan 1 koob oo qoryo qoryo ah iyo 300 g oo cawska la jajabiyey (waxaad isticmaali kartaa geedka qallalan). Waa lagama maarmaan in la adkeeyo walxaha laga helay qiyaastii 3-4 saacadood.
Diyaargaroobidda faleebo ayaa lagu talinayaa isla markiiba ka hor inta aan la buufin si loo gaaro saameynta ugu fiican.
Waa muhiim! Waa lagama-maarmaan tahay in lagu celiyo daaweynta infusions 10-15 maalmood (sida ugu muhimsan). Si kastaba ha ahaatee, buufinta ugu dambaysa waxaa lagu fuliyaa ugu dambeyn 20 maalmood ka hor goosashada.
Warshadani waxay inta badan ku dhowaadaa waddada oo kiiskani waxaa loo isticmaali doonaa sidii sunta loo yaqaan "Colorado Baradho".
Waxaad u baahan doontaa сорвать несколько больших листьев, нарезать их и заполнить половину 10-литрового ведра. Далее нарезку заливают водой и настаивают трое суток. Перед опрыскиванием картофеля настой нужно процедить.
Waa muhiim! Faleebo ayaa ugu fiican in lagu buufiyo dalagyada fiidkii, maadaama ay si dhakhso ah u luminayaan hantidooda qorraxda, iyo hawsha qashin qubka, sida aynu ognahay, dhaco waqtiga habeenkii ee maalinta.
Faleebo ee honeysuckle sare
Si aad u diyaariso faleebo, waxaad isticmaali kartaa caleemaha qalalan ee geed iyo caleemaha.
1 kg caleemo qallalan ama caleemo shub ah ku shub 10 litir oo biyo ah. Waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato hal maalin, ka dib markii faleebo la gooyey iyo ½ koob oo saabuun lagu dhaqdo lagu daro. Ka dib markii saabuunku kala diro, faleebo ayaa diyaar u ah isticmaalka.
Faleebo iyo celandine maraq
Celandine waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo xakameeyo cayayaanka beeraha iyo beeraha. Xaaladdan oo kale, iyada oo la adeegsanayo warshadan waxaa loo diyaarin karaa sida faleebo, iyo decoction si looga cabiro baradho duqsiyo Colorado.
Wixii faleebo qaado 1.3 kg of celandine (afkoda, ubax ama caleemo) iyo 3 saacadood ku adkeyso 10 litir oo biyo kulul. Ka dib markaa, celandine waa la saaraa, iyo 1 l ee 1.5% xal aqueous of chloride potassium (KCl) waxaa lagu daraa faleebo laftiisa. Faleeraha noocan oo kale ah ma aha oo kaliya cabsida ka soo cayayaanka leh urka, laakiin sidoo kale marka isku dayaya in ay ku ducaystaan ​​on caleenta caleenta qashinka.
Si aad u kariso decoction, waxaad u baahan tahay inaad jebiso polygoonka celandin, ku shub biyo qabow, oo isku kari ilaa 15 daqiiqadood dab aad u hooseeya. Dib-u-hagaajinta soo-baxa ee aan lahayn kiis lama isticmaali karo! Waxaa lagu qasi kara saamiga 1:20 (1 l oo ah maraq qaadanaya 20 l oo biyo ah).
Decoction of lørels
Wixii diyaarinta decoction ku habboon oo kaliya dhirta cusub.
200 g cawska lowska iyo 200 g caleemaha horseetail waa la jajabiyey, ku shub 10 litir oo biyo ah iyo la kariyey 15 daqiiqo. Maraq waa in loo oggolaadaa inuu qaboojiyo, ka dib markaa isla markiiba diyaar u ah isticmaalka. Sida kiiska ee celandine, foomka saafi ah, decoction gubi karaa caleemaha baradho ama habeenkii kale, sidaas darteed waa in la badhxo biyo ee saamiga 1 ilaa 20.
Beekeyska beerka oo ka dhan ah kuwa lamid ah
Beerka Birch wuxuu leeyahay antimicrobial iyo antiparasitic kuwaas oo loo isticmaalo in lagu cabo dulin badan oo ku nool beeraha iyo geedka. Xaaladdan oo kale, taranku wuxuu si fiican u burburiyaa qamadiga Colorado baradho.
Diyaarinta "daawada" waxay qaadataa 10 g oo ah tar iyo 50 g oo saabuun leh 10 litir oo biyo ah. Kaddib marka si dhamaystiran loo kala diro qaybaha waa la fulin karaa isla markiiba soo saarka beeraha.
Ma taqaanaa? Cagaarka beerta waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo duubista basasha, kaabajka, wireworm iyo duudduubka dabacasaha. Iyada oo gacan ka heleysa tarada waxaad ka cabsiin kartaa jiirarka iyo caleemaha miro iyo geedo qurxin.
Saabbuun saabuun leh
Nooc xiiso leh daaweynta dadweynaha in loo isticmaalo ilaa dirxiga muuqan. Ka dib muuqaalka, nasiib daro, qalabku waa wax aan faa'iido lahayn.
Si aad u diyaariso isku dar ah Waxaad u baahan tahay inaad qaadato 1 bar oo saabuun iyo laba litir oo ash ah. Si aad u bilowdo, saabuuni kala gooyo 10 l oo biyo ah, kadibna ku dar ash iyo ku adkeyso dhowr saacadood. Xannibaadda ku timid waxaa lagu daaweeyaa qaybta anteenada ee baradhada.
Ka duurka ubaxyada ka soo horjeeda kuwa Colorado
Haddii beerta "la qabsado" by Colorado baradho baradho, ka dibna doorasho kale oo ku saabsan sida looga takhaluso dulin sariiraha boodhka ah. Maaddooyinka kala duwan waxay bixiyaan saameyno kala duwan. Qaar waxay si fudud uga cararaan qashinka, kuwa kale - dilaan. Hal jid ama mid kale, iyo waxtarka boodhka ayaa lagu tijaabiyay beeraley badan, sidaas darteed waxaan kuu sheegi doonaa dhowr hab oo ah "boodh" budada.
Ash waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya bacriminta baradho, laakiin sidoo kale si ay u ilaaliyaan. Xaqiiqo xiiso leh ayaa ah sunta ugu badan ee baradho-baradku ku yaal Colorado waa xaashi ashuun, kaas oo ugu wanaagsan loo isticmaalo boodhadhka.
Waxaa haboon in laga bilaabo markaad ku darto boodh markaad beerto baradho. Ilaa 100 g ash waxaa la geliyaa ceel kasta, taas oo kaliya maaha oo keliya bacriminta, lakiin sidoo kale qashinka kufilan hibernating dhulka.
Marka barandhadu kor u kaco, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado boodh lagu daadiyo dambas kasta 2 asbuuc. Tani waa in la sameeyaa aroortii hore, marka dharabku uusan soo dhicin (ulaha dhagaxa ah ee caleenta iyo caleemaha si ka wanaagsan, lagu ilaaliyo iyaga xittaa cimilada dabaysha). Isticmaal ugu yaraan 10 kg oo ah ash boqolkiiba. Boodhkii ugu danbeeyay waxaa la qabtaa dhammaadka bisha Luulyo.
Haddii wax walba si sax ah loo sameeyo, ka dibna maalmo yar ka dib inta badan xayawaanku waxay ku dhiman doonaan goobta.
Isticmaalka burka hadhuudhka ah ee hantida leh: marka qoyan, waxay si weyn u kordhisaa mugga. Sidaa darteed, duurka boodhka leh budada waa loo baahan yahay in aan laga cabsiin, laakiin si ay u burburiyaan dulin.
Beetle, wax cunaya caleemo baradho ah, ka dib markaad si fudud u dillaacdo oo u dhinto. Dufanka burka, sida ash, waxaa la sameeyaa ka dib roob ama dhoobo, sidaa daraadeed isku dhafka lama daboolin dabaysha.
Balka qulqulka ah ee kaashka ah
Cirbadaha ay sabab u tahay qoondeynta saliidda ayaa urta uugu jirta si aad u xun. Taasi waa sababta cirbadaha bacaha ama qayb ka mid ah jilifka lagu daro marka la beerto baradho si looga ilaaliyo jiritaanka baradhada barafka.
Sidoo kale, sida balka u daadi karaa duurka baradho ama inta u dhaxaysa safarka inta lagu guda jiro jabinta baradiidka Colorado baradho. Habkani wuxuu siiyaa natiijooyin fiican. Haddii ka dib markii laysku dhejiyo duqsigu ma dhimanayo, waxay hubaal ka dhigeysaa inaad boggaaga ku dhaafto.
Waxaan ogaanay in baradho baradho Colorado la dagaalami karaa iyada oo aan loo isticmaalin kimistaanka, maadaama ay jiraan walxo badan oo leh saameyn waxyeelo ah on lowska. Haddii baradhadu u gudbin karaan saamaynta sunta cayayaanka, markaa, tusaale ahaan, yaanyada ama eggplants uma adkaysan doonaan tan, miro-soo-saarka mustaqbalkuna wuxuu u noqon doonaa qashinka sunta. Sidaa daraadeed, isticmaalka qaababka dadweynaha iyo dhirta xayawaanka daawada maaha oo keliya ilaalinta baradho ka soo duuduuban, laakiin sidoo kale waxaad ka soo baxdaa walxaha sunta ah.